Exercise – Page4– Healthy Life Journal
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ခန္ဓာကိုယ်က ပျော့ပျောင်းနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုင်းပြီး ကြမ်းပြင်ကို ထိလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းမှုတိုးစေဖို့ ဆွဲဆန့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုသည်မှာ ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဆန့်ထုတ်ပေးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ A. အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လှုပ်ရှားမှုကလည်း နည်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့် လှုပ်ရှားမှုလေးလည်းနည်းနည်း ရှိသင့်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာရင် ဒူးနာတယ်ဆိုပြီး လမ်းမလျှောက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း နည်းနည်းစီ လျှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။...
ခန္ဓာကိုယ်သန်စွမ်းလိုသူတို့အတွက် အလွယ်လေ့ကျင့်ခန်း ၅ မျိုး
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ပိန်သွယ်လွန်းနေလို့ ကြွက်သားတက်ချင်ရင်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အခုထက်ပိုပြီး ကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင် အိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရမယ့် အလွယ်နည်းတွေရှိပါတယ်။ ကြွက်သားကြီးထွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး မှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (၁) ဘေးတိုက်ကွေးခြင်း ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ခြေသလုံးကြွက်တက်တဲ့ ဝေဒနာ မကြာခဏ ခံစားနေရသူတွေအတွက် လွယ်ကူပြီးသက်သာအောင် မိမိဘာသာ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ♦ အိပ်ရာမဝင်ခင် နွားနို့ပူပူတစ်ခွက် သောက်တာက ခြေသလုံးကြွက်တက်တဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာစေတဲ့ ထိရောက်တဲ့နည်းပါ။ ♦...
အစာအလွန်အကျွံမစားဖြစ်အောင် ဒီအမှတ်နေရာ ၃ ခုကို ဖိနှိပ်ပေးပါ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင်က စိတ်အလိုလိုက်ပြီး အစာစားတတ်သူလား။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဖို့အတွက် စားတဲ့ပမာဏကို ထိန်းပေးရပါမယ်။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး စားတတ်သူ၊ အစာနဲ့ပါးစပ် မပြတ်စားတတ်သူတွေက ကိုယ်အလေးချိန် တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီး ကျန်းမာရေးမှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေမှာ အောက်ပါအမှတ်နေရာသုံးခုကို ဖိနှိပ်ပေးတာကြောင့် ဦးနှောက်အလယ်ရှိ...
လည်ပင်းတောင့်တင်း နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာ ပြေပျောက်စေမည့် ငါးမိနစ်လေ့ကျင့်ခန်း
———၊ လရိပ်မေ ၊——— အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာရှေ့တစ်ချိန်လုံးထိုင်ရတာ၊ အိမ်မှာတီဗီကို အကြာကြီးကြည့်တာ၊ ဖုန်းကိုအကြာကြီး သုံးတာတွေက လည်ပင်းကျန်းမာရေးကို အလွန်အမင်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ လူ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဘဝမှာ အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ လည်ပင်းတောင့်တင်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ...
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ဘာစားသောက်သင့်သလဲ
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် မိနစ် ၃၀ အလို • လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည် • ပန်းသီး • အမည်းရောင် ချောကလက် • ငှက်ပျောသီး • ထောပတ်သီး ဒီအစားအသောက်တွေက စွမ်းအင်ကို ချက်ချင်းတိုးစေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် မဖြစ်မနေ စားသောက်သင့်တဲ့ အရာတွေပါ။...
ဂျပန်လူမျိုးအများစု အသက် ၁၀ဝ အထိ ရှည်ကြတာ လျှို ့ဝှက်ချက် ၈ ခုကြောင့်ပါ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဂျပန်လူမျိုးတွေက အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း လျော့နည်းမှုရှိပါတယ်။ ယူကေမှာ နေထိုင်သူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေက ရင်သားကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း သိသိသာသာ လျော့နည်းမှုရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံရှိတာကြောင့်လို့...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တိုင်း ညစ်ညမ်းတဲ့လေထု မရှူမိစေဖို့ . . .
လေထုညစ်ညမ်းတာကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေကို ရှုရှိုက်မိတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ပြင်ပပစ္စည်းတွေကို တွန်းလှန်ပစ်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်လာပါတယ်။ ကြာရှည်ရောင်ရမ်းတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်အားနည်းမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့လေနဲ့ တာရှည်ထိတွေ ့ရတာကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တာဟာ အံ့အားသင့်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။...